Saturday August 03, 2019 - 13:40:35 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Jugta qarax aad u xooggan ayaa xalay laga maqlay xaafado katirsan degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in qarax miino uu haleelay gaari qooqan ah oo uu watay mid kamida saraakiisha ciidamada Booliska dowladda Federaalka.
Qaraxa oo ka dhacay agagaarka Xerada Afisyooni ayaan geysan wax khasaara ah, sida wararku sheegayaan qaraxa ayaa gaariga haleelay xilli uu ka degay sarkaalkii bartilmaameedka ahaa waxaana la socday darawalka gaariga oo kaliya.
Wararka ayaa intaas ku daraya in saaka markii uu waagu baryay ay goobta gaareen ciidamo katirsan Miina baarayaasha Booliska DF-ka, qaraxan ayaa imaanaya xilli ammaanka magaalada Muqdisho si aad ah loo adkeeyay.
Kumanaan askari oo isugu jira AMISOM iyo kuwa dowladda ayaa saaka lagusoo daadiyay waddooyinka muhiimka ah ee Muqdisho waxaana hakad ku jira isku socodka gaadiidka dadweynaha.
Waddooyinka laxiray ayaa loo aanaynayaa Meydka Cabdi Raxmaan Yariisoow oo lagasoo dajinayo garoonka diyaaradaha waxaana jira in mas'uuliyiin katirsan Dowladda iyo saraakiil caddaan ah ay ka qeyb gelayaan aaskiisa.